Izindaba - Ungasigcina kanjani ijazi lemvula
Ungayigcina kanjani ijazi lemvula
1. Ijazi lemvula leTape
Uma ijazi lakho lemvula liyijazi lemvula elinerabha, kufanele ubeke izingubo ezisetshenzisiwe endaweni epholile nomoya ngokushesha ngemuva kokuyisebenzisa, bese usomisa ijazi lemvula. Uma kukhona ukungcola kwijazi lakho lemvula, ungabeka ijazi lakho lemvula etafuleni eliyisicaba, bese uhlikihla ngobumnene ibhulashi elithambile lifakwe emanzini ahlanzekile ukugeza ukungcola okukulo. Khumbula ijazi lemvula eliqoshiwe Alikwazi ukugcotshwa ngezandla, ingasaphathwa eyokuvezwa yilanga, futhi alinakushiswa ngomlilo, futhi alikwazi ukuhlanzwa ngalezo zinsipho ze-alkaline. Inhloso yalokhu ukugwema ukuguga kwejazi lemvula. Noma ube brittle.
Ijazi lemvula elinetheyiphu alikwazi ukuhlanganiswa namafutha, futhi kufanele lihlanganiswe lapho ligcinwa. Ungafaki izinto ezisindayo kujazi lemvula, futhi ungazifaki nezinto ezishisayo ukuvimbela ukuthi zingacindezelwa kwijazi lemvula. Amafolda, noma imifantu. Faka amanye ama-mothball ebhokisini lejazi lemvula elinerabha ukuvikela ijazi lemvula ukuthi linganamatheli.
2. Ijazi lemvula lendwangu elingangenisi imvula
Uma ijazi lakho lemvula liyijazi lemvula, lapho ijazi lemvula limanzi ngenxa yemvula, awukwazi ukusebenzisa izandla zakho noma isigqoko soboya ukubhoboza amanzi emvula kujazi lemvula, ngoba ukwenza njalo kungalimaza ukusebenza okungangenwa ngamanzi kwezintambo ezikwijazi lemvula.
Amajazi emvula awafanele ukuwashwa njalo. Uma uyigeza njalo, kungenzeka ukuthi ukusebenza kwejazi lemvula kungangenisi amanzi. Uma ucabanga ukuthi ijazi lakho lemvula lingcolile kakhulu, ungalihlikihla ngobunono ijazi lemvula ngamanzi ahlanzekile, bese usula ijazi lemvula eligeziwe, ulilengise ukuze lome. Lapho ijazi lemvula selome ngokuphelele, thatha i-ayoni Mane ulishise. Uma uzokhipha ijazi lemvula, kufanele uyeke izingubo zome ngokuphelele ngaphambi kokuzigoqa. Lokhu kwenzelwa ukuvimbela ukusabela kwamakhemikhali kwento emuncu e-raincoat ngenxa yomswakama, okuzokwenza isikhutha semvula.
3. Ijazi lemvula lepulasitiki
Uma ijazi lakho lemvula liyijazi lemvula lepulasitiki, lapho ijazi lemvula liba manzi, kufanele usule ngokushesha amanzi akujazi lemvula ngendwangu eyomile, noma uthathe ijazi lemvula endaweni epholile futhi eyomile bese uyomisa.
Ama-raincoats amafilimu epulasitiki awakwazi ukuvezwa yilanga, ingasaphathwa eyokubhakwa emlilweni. Uma ijazi lakho lemvula lishwabene futhi lingakwazi uku-ayinawa ngensimbi, ungamanzisa ijazi lemvula emanzini afudumele ngama-degree angama-70 kuye kwangama-80 ngomzuzu owodwa, bese ulikhipha ulibeke etafuleni eliyisicaba. Sebenzisa ukuvula i-raincoat yakho ngezandla zakho. Ungadonsi ijazi lemvula kanzima ukugwema ukujama kwejazi lemvula. Uma ijazi lemvula lepulasitiki lisetshenziswa isikhathi eside, kulula ukwehliswa noma ukuqhekeka. Uma izinyembezi kujazi lemvula zingenkulu kakhulu, ungakhetha ukuzilungisa ngokwakho.
Indlela yokulungisa yilena: beka isiqeshana sefilimu lapho kudwengwe khona ijazi lemvula, bese ufaka isiqeshana se-cellophane ngaphezulu kwefilimu. Bese usebenzisa insimbi kagesi ukuyifaka ngensimbi ngokushesha ukuze ifilimu inamathele embobeni edabukile ukuqedela ukulungisa. Lapho silungisa amajazi emvula, kufanele sikhumbule into eyodwa: amajazi emvula angeke athungwe ngezinaliti. Ngaphandle kwalokho, kungenzeka kubangele izinkinga ezinkulu ngejazi lemvula.